Mdaxweynaha Puntland Ina Gaas Oo VOA Uga Waramay Qaska Uu Dalka Ka Waddo – Heemaal News Network
War-murtiyeed ayaa kasoo baxay shirkii madaxda dawlad goboleedyada ay ku yeesheen magaalada Ksimaayo waxaana lagu aas-aasay gole ay ku mideysan madaxda.
Golahan ayaa loogu magac daray Golaha Iskaashiga dawlad goboleedyada oo sanandka koowaad ay guddoomiye iyo ku xigeen u kala yihiin madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Madaxweynaha HirShabelle Maxamed Cabdi Waare.
Falastiin Axmed Iimaan oo ka tirsan idaaca VOA laanteeda afsoomaaliga, oo aan annaguna ka soo xigan waraysigan, ayaa khadka teleofonka kula xidhidhay Madaxweynaha Puntand Ina Gaas oo ay ka wareysatay shirkii Kismaayo.
Maareeyihii Hore Ee Dekada Berbera Cali Xoor Xoor Oo Wata Odihiisii Tageero Weyn U Fidiyay Xisbiga Kulmiye
Sarkaal ka tirsan Daacish-ta Soomaaliya Oo Lagu Dilay Duqeyn Cirka ah.
Sarkaal ka tirsan Ururka Daacish ee Soomaaliya ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay duqeyn Isniintii la soo dhaafay ka dhacday meel 70KM dhanka bari kaga beegan magaalada Boosaaso. Mareykanka ayaa sheegay inuu fuliyo duqeyn cirka […]
October 7, 2017 Soomaaliya
Cabdiweli Gaas ayaa u fasaxay Taliyaha ciidamada Booliiska Puntland C/qaadir Shire Faarax ( Ereg) in dib uu shaqadii u bilaabo ka dib markii bishii September Madaxweyne k/xigeenkii Puntland uu shaqada ka fariisiyay. Wareegto uu maanta […]